एकिकृत समाजवादीको पदाधिकारी टुंगो लाग्यो, कसले के-के पद पाए ? (विवरण सहित) – Sunaulo Nepal TV
एकिकृत समाजवादीको पदाधिकारी टुंगो लाग्यो, कसले के-के पद पाए ? (विवरण सहित)
काठमाडौ । काठमाडौमा जारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पदाधिकारी टुंगो लगाएको छ । एकीकृत समाजवादीले चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र चार सचिव चयन गरेको हो । उपाध्यक्षहरुमा राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, धर्मनाथप्रसाद साह र जयन्ती राई चयन भएका छन् । बेदुराम भुसाल महासचिव बनेका छन् ।
उपमहासचिवमा गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल छन् । सचिवहरुमा केशवलाल श्रेष्ठ, जगनाथ खतिवडा, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी र रामकुमारी झाँक्री चयन भएका छन् । सचिवालयले टुंगो लगाएका यी पदाधिकारीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरिदैछ ।
माधव नेपालको जोडबलमा बेदुराम महासचिव बनेका हुन् । महासचिवमा राजेन्द्र पाण्डेले पनि दावी पेश गरेका थिए । नेपालले नै पाण्डेलाई उपाध्यक्षमा र बेदुरामलाई महासचिव भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए । नेकपा एमालेवाट विभाजन भएर माधव कुमार नेपालले नेकपा एकिकृत समाजवादी दर्ता गरेका हुन् । पार्टीको अध्यक्ष नेपाल हुन् ।
Previous आमालाई बचाउने क्रममा छोराको मृत्यु
Next रामकुमारी झाँक्री नेकपा एसको सचिव, माधव नेपालको प्रस्ताव राजेन्द्र पाण्डेले मानेनन्